जाडो मौसममा सुन्दर मुहारको लागि यस्तो ‘टेक्निक’ अपनाउनुहोस् ! « Lokpath
२०७७, ५ मंसिर शुक्रबार १९:००
जाडो मौसममा सुन्दर मुहारको लागि यस्तो ‘टेक्निक’ अपनाउनुहोस् !
प्रकाशित मिति : २०७७, ५ मंसिर शुक्रबार १९:००
काठमाडौं – धेरैको एउटै चाहना हुन्छ, सुन्दरतामा निखार ल्याउनु । तर, जाडोको समय सुन्दरतामा ह्रास आउन सक्छ । विशेषगरी महिलाहरु सुन्दरताका लागि अनेक कस्मेटिक सामाग्री प्रयोगका साथै नियमित पार्लर पनि जाने गर्छन् । तर घरमै सहज रूपमा उपलब्ध हुने तेलबारे भने धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । कस्मेटिकभन्दा घरमै पाइने तेल सुन्दरतामा निखार ल्याउन अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
तेलले छालामा स्वच्छ तथा चमक प्रदान गर्नुका साथै ओठलाई नरम, नङलाई बलियो बनाउन पनि एकदमै उपयोगी मानिन्छ । तल दिर्इएका टिप्स आफैँ प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र आफैँ फरक महशुस गर्नुहोस् ।
-जाडो मौसममा छालालाई चिसोबाट जोगाउन एक चम्चा क्यास्टर ओयल र आधा चम्चा गुलाबजल मिलाउने । त्यसलाई हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा लगाउने र बिहान मनतातो पानीले पखाल्ने
-घामले डढेको छाला छ भने त्यसलाई हटाउन जैतुनको तेल र भेनेगर बराबर मात्रा मिसाउने र नुहाउनु एक घण्टा अगाडि त्यसलाई लगाउने
-सुख्खा छालाका लागि जैतुनको तेलमा नरम कपडा भिजाएर नाक र आँखा भएको ठाउँमा प्वाल बनाएर अनुहारलाई छोप्ने । आधा घण्टापछि सफा कपडाले पुछ्ने । यो प्रक्रिया राति सुत्नुअघि गर्ने र बिहान उठेर मनतातो पानीले अनुहार धुने
-एन्टी रिङ्कल क्रिम बनाउन एक चम्चा जैतुनको तेल र अण्डा मिसाएर अनुहार तथा घाँटीमा लगाई त्यसलाई सुक्न दिने । सुकेपछि तातो पानीमा एक चम्चा सोडा मिसाई कटनले राम्ररी पुछ्ने
-सबैभन्दा राम्रो ब्यूटी मास्क बनाउन एक चम्चा चनाको पिठोमा सुन्तला बोक्राको पाउडर, जैतुनको तेल र एक चम्चा मोही मिसाउने ।
-यो लेपलाई आफ्नो अनुहार तथा घाँटीमा लगाउने र सुकेपछि हातले रगड्ने । त्यसपछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गरी चिसो पानीले मुख धुने । यसले तपाईंको अनुहारमा भएको दाग हटाउन पनि मद्दत गर्छ । साथै तपाईंको छालालाई नरम तथा चमक प्रदान गर्छ
-अनुहारमा धेरै दाग छन् भने पहिला १० मिनेट बाफ लिने । राम्ररी क्लिन्जिङ गरी नरम कपडाले पुछ्ने । त्यसपछि एक चम्चा जैतुनको तेलमा आधा चम्चा कागतीको रस मिसाएर अनुहारमा मसाज गरी २० मिनेटपछि अनुहारमा आइस ५ मिनेटसम्म राख्ने
-अनुहारमा कालो धब्बा तथा सुख्खा छ भने एक चम्चा चनाको पिठोमा एक चम्चा बेसार, केही थोपा कागतीको रस, आधा चम्चा जैतुनको तेल र दूध मिसाएर लेप तयार गरी अनुहारमा आधा घण्टा राखेर सफा गर्ने
-अनुहारमा नरमपना तथा चमक ल्याउन राति सुत्नुअघि बेबी ओयल अनुहार तथा घाँटीमा लगाउने
-सुख्खा तथा फुटेको छालामा एक चम्चा बदामको तेल, कागतीको रस र दूधको क्रिम राखेर लेप तयार पार्ने । त्यसलाई हरेक रात सुत्नुअघि आफ्नो अनुहार तथा घाँटीमा लगाउने
-सुख्खा छालालाई सफा राख्न अण्डाको पहेँलो भाग, आधा चम्चा जैतुनको तेल र कागतीको रस मिसाएर अनुहारमा सुत्नेबेला लगाउने
-जाडो महिनामा छालालाई सुख्खापनबाट बचाउनुछ भने दुई चम्चा जैतुनको तेल र आफूलाई मनपर्ने पर्फ्युम मिसाई छालामा मसाज गर्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो छाला नरम, कोमल र चमकयुक्त पाउनुहुन्छ
-तपाईंको नङ कमजोर छ भने बेबी अयलमा सेतो आयोडिन मिसाएर लगाए नङ बलियो हुन्छ
-तपाईको ओठ फुस्रो छ भने राति सुत्नुअघि बेबी अयलले मसाज गर्ने ।
(एजेन्सीको सहयोगमा तयार पारिएको सामाग्री)